Fampiharana tsara indrindra haka sary panorama amin'ny Android | Androidsis
Fampiharana tsara indrindra haka sary panorama amin'ny Android
Elvis bucatariu | | Fampiharana Android, sary
Ny sary panoramic dia malaza indrindra amin'ny tambajotra sosialy, ary na dia manolotra an'io fampiasa io aza ny terminal Android rehetra, misy ny rindranasa sasany izay hanampy anao haka sary panoramic amin'ny sehatra hafa.
Mampahafantatra anao izahay amin'ity lahatsoratra ity ny rindranasa tsara indrindra haka sary malalaky amin'ny Android toy ny pro, ao anatin'izany ny sary mankany 360 degre azonao zaraina amin'ny tambajotra sosialy.
1 Panorama 360: Sary VR
3 Kitapo fakan-tsary
Panorama 360: Sary VR
Panorama 360 dia iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra amin'ny fakana sary panoramic 360 degree. Ity rindranasa ity dia manana fampidinana mihoatra ny 4 tapitrisa ary manana vondron'olona mpampiasa mizara ny zavatra noforonin'izy ireo. Ny fampiharana dia mitondra tutorial video fohy ihany koa izay manazava ny fomba hakana sary tonga lafatra ary avy eo hizara izany amin'ny tambajotra sosialy. Azonao atao koa ny mampiasa sivana 3D hitondrana fiainana bebe kokoa ny sarinao.
Fakan-tsary Panorama 360: Fitsangatsanganana an-tserasera: Sary 360
Fampiharana iray hafa izay afaka manampy anao haka sary lehibe ao amin'ny Android dia ny Photaf Panorama. Tena mahaliana ity app ity satria misy tondro vitsivitsy izay hitarika anao haka sary tonga lafatra.
Photaf Panorama (Maimaimpoana)
Cardboard Camera dia fampiharana novolavolain'i Google indrindra amin'ny fakana sary zava-misy virtoaly. Mba hakana ny sary voalohany dia tsy maintsy afindrao anaty faribolana iray ny findainao rehefa maka sary panoramic ianao. Amin'ny farany, ny valiny dia ho sary misy vokany telo-habeny ary hanana ny mety firaketana ny feo aza ianao.
Raha tianao ny Panorama 360, dia ho tianao ny PanOMG, fampiharana iray heverina ho mpandimby ny Pan360 izay nahazo loka maro tamin'ny sokajy misy azy.
Farany, manana ny fampiharana Panorama Camera 360 avy any Fotolr izahay. Tena mora ampiasaina ity fampiharana ity satria ny sisa ataonao dia tsindrio ny kisary fakantsary ary manomboka mihodina ny finday. Ho fanampin'izany, izy io koa dia mety ahafahana mampandeha ny Flash rehefa mila izany ianao ary afaka manapa-kevitra ny halehiben'ny fanirianao ny sary panoramic.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsara indrindra haka sary panorama amin'ny Android
Juan Ricardo Jerez Olivares dia hoy izy:
Salama manao ahoana
Valiny tamin'i Juan Ricardo Jerez Olivares
Janis dia hoy izy:
Heveriko fa nandiso zava-dehibe iray ianao, tsy hilaza ny tsara indrindra satria tsy nanandrana azy rehetra aho, DMD Panorama.
Mamaly an'i janis
DMD Panorama no tsara indrindra hatreto ... Mamela anao haka sary amin'ny HD sy HDR ary avy eo manatevin-daharana azy ireo ... Ny kalitaon'ity iray ity, tsy misy an'izay voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity manana an'io ... Ary saika nanandrana aho izy rehetra.
LG vs. Samsung: nohamafisina ny tolona amin'ny famokarana efijery OLED
Manafina maody Paw vaovao i Google Phone